Soo dejisan WeatherBug 10.0.7.4 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: WeatherBug
WeatherBug – software ah si aad u eegto xaaladaha cimilada dambeeyay adduunka oo dhan. software waa ay awoodaan in ay soo bandhigaan macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan cimilada la tilmaamayaasha ee heerkulka, dabaysha, qoyaanka, cadaadis, roobab, iwm WeatherBug kuu ogolaanayaa inaad si aad u eegto saadaasha cimilada saacadeed iyo todobaadle ah. software The u saamaxaaya in ay raacaan heerka kartoon ah cadaadis, boqolkiiba qoyaan, jihada dabaysha ama xawaaraha on map-ka. Sidoo kale WeatherBug ku jira qalabka loo baahan yahay si ay u dejiyaan doorashooyinka cimilada ee baahida shakhsi ahaaneed ee user ah.
bandhigay faahfaahsan oo isbedel ah ee cimilada
Saacadii oo todobaadle Saadaasha hawada
Bandhigay xaaladaha cimilada on map-ka
Soo dejisan WeatherBug
Faallo ku saabsan WeatherBug
WeatherBug Xirfadaha la xiriira